1 Tantara 15 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Tantara 15:1-29
15 Ary i Davida mbola nanao trano+ hafa ho azy tao amin’ny Tanànan’i Davida. Dia nanomana toerana+ ho an’ny Vata masin’Andriamanitra izy, ka nanangana tranolay ho azy io. 2 Ary hoy i Davida tamin’izay: “Tsy misy mahazo milanja ny Vata masin’Andriamanitra afa-tsy ny Levita ihany, satria izy ireo no nofidin’i Jehovah hilanja ny Vata masin’i Jehovah+ sy hanompo+ azy mandritra ny fotoana tsy voafetra.” 3 Dia novorin’i Davida tany Jerosalema+ ny Israely rehetra, mba hampiakatra ny Vata masin’i+ Jehovah ho any amin’ny toerany, izay efa nomaniny ho azy. 4 Ary novorin’i Davida ny taranak’i Arona+ sy ny Levita, 5 ka tamin’ny taranak’i Kehata, dia i Oriela+ mpiadidy sy ny rahalahiny, roapolo amby zato; 6 tamin’ny taranak’i Merary,+ dia i Asaia+ mpiadidy sy ny rahalahiny, roapolo sy roanjato; 7 tamin’ny taranak’i Gersoma,+ dia i Joela+ mpiadidy sy ny rahalahiny, telopolo amby zato; 8 tamin’ny taranak’i Elizafana,+ dia i Semaia+ mpiadidy sy ny rahalahiny, roanjato; 9 tamin’ny taranak’i Hebrona, dia i Eliela mpiadidy sy ny rahalahiny, valopolo; 10 ary tamin’ny taranak’i Oziela,+ dia i Aminadaba mpiadidy sy ny rahalahiny, roa ambin’ny folo amby zato. 11 Nantsoin’i Davida koa i Zadoka+ sy Abiatara+ mpisorona, ary Oriela,+ Asaia,+ Joela,+ Semaia,+ Eliela,+ ary Aminadaba, izay samy Levita. 12 Koa hoy izy tamin’ireo: “Ianareo no lohan’ny+ fianakaviamben’ny Levita. Koa hamasino+ ny tenanareo sy ny rahalahinareo, ary ampiakaro ho any amin’ilay toerana efa nomaniko ho azy, ny Vata masin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely. 13 Fa noho ianareo tsy nanao izany tamin’ny voalohany,+ dia nirehitra tamintsika ny fahatezeran’i Jehovah Andriamanitsika,+ satria tsy nitady azy araka ny fanao mahazatra isika.”+ 14 Dia nanamasina+ ny tenany ny mpisorona sy ny Levita, mba hampiakatra ny Vata masin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely. 15 Koa nilanja+ ny Vata masin’Andriamanitra tamin’ny bao ny taranak’i Levy, ka nanao izany teo an-tsorony,+ araka izay nandidian’i Mosesy nifanaraka tamin’ny tenin’i Jehovah. 16 Ary i Davida nilaza tamin’ny mpiadidy teo amin’ny Levita mba hanendry ny toeran’ireo rahalahiny mpihira+ izay nitondra zavamaneno,+ dia lokanga+ sy harpa+ ary kipantsona.+ Ary nasaina nampanenoina mafy izany mba haredona tsara ny feon-kiram-pifaliana. 17 Koa notendren’ny Levita ny toeran’i Hemana+ zanak’i Joela, sy ny an’i Asafa+ zanak’i Berekia, izay notendrena teo amin’ny rahalahiny. Ary i Etana+ zanak’i Kosaia no notendrena teo amin’ny taranak’i Merary rahalahin’izy ireo. 18 Ary niaraka tamin’izy ireo ny rahalahiny tao amin’ny fizarana faharoa,+ dia i Zakaria,+ Bena, Jaziela, Semiramota, Jehiela, Ony, Eliaba, Benaia, Mahaseia, Matitia, Elifeleho, Mikneia, ary koa i Obeda-edoma+ sy Jeiela izay samy mpiandry vavahady; 19 ary i Hemana+ sy Asafa+ ary Etana, izay mpihira nitondra kipantsona varahina nampanenoina mafy;+ 20 ary i Zakaria, Aziela,+ Semiramota, Jehiela, Ony, Eliaba, Mahaseia, ary Benaia, izay nitendry lokanga nampanarahina feo Alamota;+ 21 ary i Matitia,+ Elifeleho, Mikneia, Obeda-edoma, Jeiela, ary Azazia, izay nitendry harpa+ nampanarahina feo Seminita,+ ary izy ireo no mpitarika; 22 ary i Kenania+ mpiadidy teo amin’ny Levita mpilanja ny Vata, izay nanome ny toromarika momba ny filanjana satria hainy tsara izany;+ 23 ary i Berekia sy Elkana, mpiandry vavahadin’ny+ toerana nisy ny Vata; 24 ary i Sebania, Josafata, Netanela, Amasay, Zakaria, Benaia, ary Eliezera, izay mpisorona nitsoka mafy ny trompetra+ teo anoloan’ny Vata masin’Andriamanitra; ary i Obeda-edoma sy Jehia, mpiandry vavahadin’ny toerana nisy ny Vata. 25 Dia nandeha i Davida+ sy ny anti-panahin’ny Israely+ ary ny lehiben’ny+ arivo, mba hampiakatra amim-pifaliana+ ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah, ka haka azy io ao an-tranon’i Obeda-edoma.+ 26 Ary rehefa nampian’Andriamanitra+ ny Levita izay nilanja ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah, dia nanao sorona vantotr’ombilahy fito sy ondrilahy fito izy ireo.+ 27 Ary akanjo tsy misy tanany, izay vita tamin’ny lamba tena tsara no nanaovan’i Davida sy ny Levita rehetra nilanja ny Vata, sy ny mpihira, ary i Kenania+ lehiben’ny mpihira+ izay nilanja ilay Vata. Nanao efoda+ rongony koa anefa i Davida. 28 Ary nampiakatra ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah ny Israelita rehetra, sady nanao horakora-pifaliana+ narahina feon’anjombona+ sy trompetra+ ary kipantsona.+ Nitendry lokanga sy harpa+ koa izy ireo ka nanakoako ny mozika. 29 Rehefa tonga tao amin’ny Tanànan’i Davida ilay Vata misy ny fifanekena+ nataon’i Jehovah, dia nitazana avy teo am-baravarankely i Mikala+ zanakavavin’i Saoly. Koa nony nahita an’i Davida Mpanjaka nitsinjatsinjaka sy nitotorebika izy,+ dia nanamavo+ azy anakampo.
1 Tantara 15